Lalàna – Politika
Étiquette : <span>Lalàna</span>
Misy hatrany ny fironan-kevitra ny amin’ny fametrahana ny governemanta manana fahefana kokoa mihoatra amin’ireo antenimiera roa tonta, na inona na inona fitondrana mijoro. Toe-javatra izay miteraka fihenan-kasina amin’ny andraikitra maha parlemantera, ny amin’ny fanatanterahana ny raharaha samihafa mifanoaka amin’ny Lalàmpanorenena. Ny lahateny mampiraraka ivy matetika no tsikaritra eny anivon’ny antenimierampirenena, mandritra ny fotoana hanatanterahana ny...
Dingana arahina amin’ny fandaniana lalàna
Miomankomana ny amin’ny fisafidianana ireo solombavambahoaka 151 hisolontena azy eny anivon’ny antenimierampirenena ny mpifidy ka hiatrika fifidianana ny 27 mey ho avy izao. Fotoana kosa izao hahafahana miresaka ny iray amin’ireo andraikitra fototra ilàna ny parlemantera, dia ny fandaniana lalàna izany. Fanapahan-kevitra iombonan’ny governemanta sy ny parlemanta ny fametrahana lalàna. Matetika dia miainga amin’ny volavolan-dalàna...